နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မကြာသေးမီက ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-အိုင်ယာလန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများကို ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိုငျယာလနျ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိုငျယာလနျ သံအမတျကွီးအဖွဈ မကွာသေးမီက ခနျ့အပျခွငျးခံရသော H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter အား ယနေ့ နံနကျ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနဈတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-အိုငျယာလနျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေး၊ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ၏ နောကျဆုံးဖွဈပျေါတိုးတကျမှုမြားကို ဆှေးနှေးအမွငျခငျြး ဖလှယျခဲ့ကွသညျ။